Madaxweyne Siilaanyo Oo Shir Aan Caadi Ahayn La Yeeshay Wasiirrada iyo Taliyeyaasha Ciidamadda | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Madaxweyne Siilaanyo Oo Shir Aan Caadi Ahayn La Yeeshay Wasiirrada iyo Taliyeyaasha Ciidamadda
Published on November 28, 2017 by sdwo · No Comments
Hargaysa (SDWO): Madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa maanta kulan aan caadi ahayn la yeeshay golihiisa wasiirrada, maareeyeyaasha hay’addaha dawliga ah iyo taliyeyaasha ciidamadda qaranka.
Shirkan deg dega ah ee uu madaxweyne Siilaanyo la yeeshay golaha wasiirrada taliyeyaasha ciidamadda masuuliyiinta wakaaladaha dawliga ayaa lagu tilmaamay mid uu madaxeynuhu kual sii dar-daarmayay masuuliyiintaasi kala duwan, maadaama oo la filayo in xukuumad cusub uu dhawaan soo magacaabo madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi.
Madaxweynaha xilka ka sii degaya oo khudbad u jeediyay wasiirradii iyo hogaanka sare ee ciidamadda ee shirka joogay ayaa sheegay ugu horayn uga mahad celiyay doorkii muuqday ee ay ka soo qaateen ololihii doorashadda ee xisbiga Kulmiye mar labaad ku guulaystay.
“Ugu horreyn, waxaan si weyn idiinku bogaadinayaa dedaalka iyo doorkii qiimaha lahaa, ee aad ka qaadateen ololaha doorashooyinka Xisbiga Kulmiye. Waxaan aamin-sanahay, in aad udub-dhexaad u tihiin guusha xisbiga kulmiye gaadhay.
Waxaan aamin-sanahay, in xisbiga kulmiye lagu doortay horumarkii iyo wax-qabadkii uu dalka ka hirgeliyey, ee aad bud-dhiga u ahaydeen. Waxaan aamin-sanahay, in aynu xaqiijinnay himilooyinkii iyo hadafkii aynu lahayn, xukuumad ahaan iyo xisbi ahaanba” ayuu yidhi Siilaanyo.
Isagoo hadalkiisa sii watayna waxa uu yidhi “Sharaf weyn ayay ii tahay, aniga ka madaxweyne ahaan iyo idinkaba, in mar labaad xisbigeenii uu ku guulaysto hoggaaanka talada dalka. Sumcad iyo wanaagga aan maanta kaga tegay qarankan, idinkaa sabab u ah.
Hoggaamiyeyaashu way kala nasiib badan yihiin ama way kala cawo iyo ayaan badan yihiin. Kumaan khasaarin, isla markaana EEBBE iguma xilin, in aan idiin cugtay ama idiin magacaabay in aad noqotaan kaaliyeyaashaydii. Sidaa darted, waxaan jecelahay in aan dhammaantiin idiinka mahad celiyo, sidii hagar la’aanta ahayd ee aad u gudateen xilkii qaranka, isla markaana aad iila shaqayseen, iina garab is-taagteen”.
Geesta kale Axmed Siilaanyo ayaa kula dar-daarmay dhamaanba masuuliyiinta kala duwan ee xukuumadiisa in ay diyaariyaan xil wareejinta, isla markaana ay ilaaliyaan hantidda qaranka inta lagu jiro xiliga kala guurka ah.
Isagoo fariintaasi dirayayna waxa uu yidhi “Sida aad la socotaan, waxaynu ku jirnaa xilli kala guur ah, oo aynu xilkii qaranka ku wareejinayno, madaxweynaha cusub ee la doorta, Mudane Muuse Biixi Cabdi. Haddaba, waxaan idin farayaa in mas’uul waliba deg-deg u diyaariyo, xil wareejintii looga baahnaa.
Waxa kale oo aan idinku adkaynayaa in wakhtiga kala guurka ah, la ilaaliyo hantida qaranka. Wakhtiga iyo qaabka xil-wareejinta. gun iyo gebo-gebo, waxaan idinkaga tagayaa niyad sami, mustaqbal wacan, madaxtinimo iyo duco”.